Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » USA Travel News » 2021 Toerana fitsangantsanganana tsara indrindra any Etazonia no voatonona anarana
Ny faritry ny metro Los Angeles no tanjona manintona indrindra amin'ny morontsiraka Andrefana ary ny faritry ny metro any Atlanta no tanjona tsara indrindra amin'ny East Coast.
Ny salan'isan'ny sidina mankany amin'ny toeran-kaleha malaza dia mitentina $ 293.73
Florida, Oklahoma ary Texas no toeram-pitaterana toerana faratampon'ny fahavaratra any Etazonia
I Michigan sy Pennsylvania no manana ny isa betsaka indrindra amin'ny toerana tsy tian'ny besinimaro malaza indrindra
Miaraka amin'ny vaksinin'ny COVID-19 ho an'ny Amerikanina rehetra sy ny isan'ny mpandeha isan'andro mandalo ny toeram-pisavana TSA mihoatra ny 10 heny noho ny tamin'ny taon-dasa, ny mpandinika indostrian'ny fizahan-tany dia namoaka ny tatitra momba ny 2021's Best Summer Travel Destinations.
Mba hanampiana ny mpandeha hanao drafitra ny fialantsasatra amin'ny fahavaratra tonga lafatra, dia nampitaha ireo manam-pahaizana 100 faritra metro manerana ny 42 famantarana lehibe ny amin'ny teti-bola sy ny finam-po mahafinaritra. Ny tahirin-kevitra dia manomboka amin'ny vidin'ny sidina mora indrindra ka hatramin'ny isan'ny manintona tranga COVID-19.
Toerana fitsangatsanganana an-tampon'ny 20 fahavaratra indrindra
Ny salan'isan'ny sidina mankamin'ny toeran-kaleha malaza dia mitentina $ 293.73, maharitra 3 ora sy 44 minitra ary misy fifandraisana 0.3.
Florida, Oklahoma ary Texas no toeram-ponenana any amin'ny toerana mafana indrindra any Etazonia, ary samy manana faritra metro roa ao amin'ny tampony 15. Mifanohitra amin'izany, i Michigan sy i Pennsylvania no manana ny isan'ny toerana be mpitia indrindra amin'ny fahavaratra, ary samy manana faritra metro roa izy ireo.
The Orlando Ny faritry ny metro dia manana ny taha ambany indrindra isaky ny alina amin'ny efitrano fandraisam-bahiny misy kintana telo, $ 32, izay 4.9 heny tsy lafo noho ny ao Santa Rosa, ny faritra metro manana $ 157 avo indrindra.